Fahasalamana - Maro ireo olona voan'ny aretin-kibo
Fahasalamana – Maro ireo olona voan’ny aretin-kibo
Published by Book News on January 9, 2019 January 9, 2019
Ny loto sy ny tsy fitandremana eo amin’ny sakafo hoanina no anisan’ny antony mahatonga ny aretin-kibo.
Maro ireo tratran’ny aretin-kibo
Maro ireo olona tratran’ny aretin-kibo ao anatin’ny fotoam-pahavaratra sy vita fety toy izao.
Maro ireo olona tratran’ny aretin-kibo ao anatin’ny fotoam-pahavaratra sy vita fety toy izao. Ilaina araka izany “ny fitandremana eo amin’ny sakafo hoanina”, araka ny nambaran’ny mpitsabo, ny dokotera Fidy Bariniaina.
Tokony hadio foana ny tanana. Ilaina ny misasa tanana amin’ny savony mialoha ny hisakafo. Tokony hangotraka ihany koa ny rano hisotroina. Tsy azo atao ny mihinana sakafo efa lany daty.
Ankoatra izay, dia nilaza ihany koa ny dokotera fa “ilaina ny manantona toeram-pitsaboana raha sendra toe-javatra mampiahiahy toa ny aretin-kibo”.
Ankoatra ireo dia vanimpotoana hitrangan’ny aretina kitrotro koa izao. Ity farany avy amin’ny “rougeole”, izay malaky mifindra. Fomba maro no mety hampifindra azy toa ny fifindrana amin’ny alalan’ny fofon’aina, ranon-delo. Mety ho voan’ny kitrotro ihany koa ny olona efa vita vaksiny fanefitra raha toa ka ka voatazony ny tanjany. Noho izany, ankoatra ny fanaovana vaksiny dia ilaina ny fitazomana ny ahatanjahana amin’ny alalan’ny fahampian’ny torimaso sy ny fihinanana sakafo ara-pahasalamana. Ilaina ihany koa ny fipetrahana amin’ny toerana azon’ny masoandro.
Marihina fa mety mahafaty ny kitrotro.
IKOLO – une entreprise sociale de produits cosmétiques naturels et bio on Special market for mother’s day – Des cadeaux pour maman et bien plus
Hetsika “Little Garden & Green Energy” – Nahasarika olona maro ny tsenam-boninkazo - Book News Madagascar on Hetsika “Little Garden & Green Energy” – Omen-danja ny angovo azo havaozina sy ny tontolo maitso
Formation des Influenceurs positifs deuxième édition – Les jeunes à l’honneur - Book News Madagascar on Formation des Influenceurs positifs – Influencer positivement sur le comportement à travers les réseaux sociaux
Grève ne signifie pas “guerre” on Strike does not mean “war”
Fifidianana – Fametrahana laharana maitso ahafahan’ny olom-pirenena miantso
Fizalaotra – Hiavaka ny fankalazana ny faha 40 taonan’ny fikambanana
Homarihina mandritra ity taona ity ny faha 40 taonan’ny Fikambanana Fizalaotra. Feno 40 taona ny Fizalaotra Hetsika maro no hoentina hanamarihana ny faha 40 taonan’ny fikambanana Zanaka Ampielezana Terak’Alaotra na ny Fizalaotra amin’ity taona ity. Read more…
Aterineto, mamono ny teny Malagasy ve ?
Raha jerena avy aty ivelany tokoa dia toa maty na hoe eo am-pialana aina angaha ny tenin-drazantsika. Minoa ahy anefa ianao fa maro ireo sehatra, orinasa, sampan-draharaha mivoy ny maha-Malagasy sy ny teny Malagasy. Andro Read more…